ग्रामीण क्षेत्रमा दुई वर्ष निःशुल्क इन्टरनेट : कहाँ–कहाँ निःशुल्क इन्टरनेट ? – rastriyakhabar.com
काठमाडौं । सरकारले ग्रामीण क्षेत्रमा निःशुल्क इन्टरनेट सेवा दिने कार्यक्रम अघि बढाएको छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणले आगामी आर्थिक वर्षभित्र ग्रामीण क्षेत्रका सरकारी तथा सामुदायिक शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य संस्था र वडा, गाउँपालिका तथा नगरपालिका कार्यालयमा निःशुल्क इन्टरनेट सेवा पुर्याउने भएको हो । यसका लागि टेन्डर, सेवाप्रदायक छनोट र सम्झौता कार्यलाई तीव्रता दिइएको प्राधिकरणका निर्देशक आनन्दराज खनालले बताए । ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट पुगेको दुई वर्षसम्म निःशुल्क सेवा दिने प्राधिकरणले जनाएको छ । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
”निश्चित अवधिका लागि निःशुल्क ब्रोडब्यान्ड दिने सरकारी नीति असाध्यै राम्रो हो । यसले इन्टरनेटको पहुँच तथा प्रयोग बढाउँछ । ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट विकासको बाहक पनि हो । ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटसँगै ई–कमर्स, ई–गभर्नेन्सलगायतका सुविधा गाउँगाउँ पुग्छन् । यसले हाम्रो कुल गार्हस्थ उत्पादनमै योगदान दिन्छ । सकेसम्म राज्यले सार्वजनिक स्थल र ग्रामीण क्षेत्रमा सधैँभरि निःशुल्क इन्टरनेट सेवा दिनुपर्छ । यद्यपि, निश्चित अवधिका लागि दिइने व्यवस्थाले पनि जनतालाई इन्टरनेटको सम्भावना र फाइदाबारे चेतना अभिवृद्धि गराउँछ । र, प्रयोगका लागि आकर्षित तथा प्रयोगमा अभ्यस्त पनि बढाउँछ ।” (भेषराज कँडेल, पूर्वअध्यक्ष, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण
मङ्लबार, जेष्ठ ३०, २०७४ मा प्रकाशित
कस्ता छन् मकै खाँदाका फाइदा ?
गर्मी मौसमका लागि केही ‘व्यूटी टिप्स’
रायोकाे साग खानुहाेस् , यी २० राेगबाट छुटकारा पाउनुहाेस्
दुखद खबर : ललितपुरमा ६ वर्षीय बालिका बलात्कृत
यातायात व्यवस्था कार्यालय सुकेधाराका उपसचिवसहित तीनजनाविरुद्ध मुद्दा दायर